Home casino slots house edge digital casino royale imdb
A na-enyefe onye isi ochichi gọọmentị nke ndị omeiwu a na-ahụ maka ndị omeiwu (PDP) na steeti Osun, Sen. Ademola Adeleke ụbọchị asaa iji weta akwụkwọ ụlọ akwụkwọ sekọndrị.
Ụlọikpe Kasị Elu nke Ọchịchị Osun nyere iwu na Tọzdee n’onye ahụ ga-eme nhoputa ndi ochichi nke Sept. 22.
Onye agha Rasheed Olabayo na Oluwaseun Idowu ekpeela ekpere ka ụlọikpe ahụ ghara ime Adeleke ka ọ ghara inweta akwụkwọ akwụkwọ, dị ka Nkeji 177 (d) chọrọ gbasara iwu 1999.
Ha rịọkwara ụlọikpe ahụ ka ha wepụ isi nke July 21 nke mere Adeleke ka ọ bụrụ onye na-achị gọọmentị.
Na mkpebi ya na ụnyaahụ banyere ngwa ngwa mbụ, ikpe ziri ezi David Oladimeji,
gwara Adeleke ka o chee akwụkwọ ụlọ akwụkwọ sekọndrị n’ihu ụlọikpe ahụ na Aug. 1.
Oladimeji kwenyere na nkwekọrịta a na-emebu nwere nanị ụbọchị asaa, na-agbakwunye na a ka nwere windo na-emeghe ruo mgbe Ọgọst 8, dị ka nkwupụta ndị ndị na-enyo enyo kwupụtara.
“Ọ gaghị abụ ihe na-ekwesịghị ekwesị ka ị ghara ikwe ka onye ahụ meghachi omume bịa ma gosipụta akwụkwọ ya, ma ọ bụrụ na ọ nwere. Ma ọ bụrụ na enyere ya ohere ka ọ bịa n’akụkụ ikpe ahụ, a ga-atụle ya nke ọma, bụ nke dị mkpa iji mee mkpesa. ”
Ikpe ziri ezi Oladimeji kwadoro nchegharị ahụ ruo mgbe ọ ga-erule n’Agọst 1 maka ịnụrụ ya.
Ọzọkwa, Adeleke ebubo ndị ọ kpọrọ “ndị na-ede akwụkwọ ise” maka ọrụ ya.
N’ịgwa ndị nta akụkọ na Abuja na Thursday, Director of Media and Publicity, Adeleke Campaign Organization, Mallam Olawale Rasheed, kwuru na ndị na-ede akwụkwọ nke ise na-akpọ “ihe mbibi”? akwukwo nke onye nlekota ha “megide PDP.
Rasheed kwuru na ọ bụ ezie na nzukọ mgbasa ozi ghọtara ikike nke onye ọ bụla na-achọsi ike ịchọta nkwụghachi, mmepe, ka o kwuru, welitere ajụjụ ndị na-adịghị mma banyere ezi ebumnobi nke ogige ahụ siri ike.
Ufodi ndi ochichi nke PDP ndi bu ndi ochichi nke mbu eburu ulo ikpe Adeleke n’ihi ebubo na ha enweghi akwukwo nke ulo akwukwo.
Ndị òtù ahụ na-achọ ka ụlọ ikpe ahụ nyefee oge na-ezighi ezi iji wepụta ihe nrite nke nhoputa ndi ochichi nke mere Adeleke.
Ndị ikpe ahụ na-arịọ ụlọikpe ahụ ka ha nye iwu iji gbochie ndị PDP ahụ iji mee ka aha Adeleke gaa na Nọọmenti Electoral Electoral Independent (INEC) maka nchịkọta gọọmentị nke September 22.
Tags: adelekecourtihenemeIHENEME NOBODOihenemenobodoIsimbidoisimbidopostISIMBIDOPOSTSISIMBIDOTVLATESTnewnewsnobodoOSUNPOLITICSpostpostsSENATORstateupdate